BYD က သူ့ရဲ့ flagship SUV ကား ဖြစ်တဲ့ Don DM-p ကို ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက် မှာ ဖြစ်ပါတယ် - Pandaily
BYD က သူ့ရဲ့ flagship SUV ကား ဖြစ်တဲ့ Don DM-p ကို ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက် မှာ ဖြစ်ပါတယ်
Jun 08, 2022, 12:24ညနေ 2022/06/08 14:13:21 Pandaily
တရုတ် ကား ထုတ်လုပ်သူ BYD က သူ့ရဲ့ flagship SUV Don DM-p ရဲ့ ဓာတ်ပုံ တွေကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြသ ခဲ့ပြီး ကြေညာကား သစ္မ်ား ႀကိဳ ေရာင္း ႀကိဳ ၀ယ္ မိတ္ဆက္ ပြဲကို ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ က်င္းပ မည္.
BYD Tang DM-p ရဲ့ ကိုယ်ထည် အရွယ်အစား ကတော့ 4870x1950x1725mm ဖြစ်ပြီး ဘီး အခြေ ကတော့ 2820mm ဖြစ်ပါတယ်။ အလတ္စား SUV ကား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အေလးခ်ိန္ ၂ ၁၅၀ ကီလိုဂရမ္ ရွိပါတယ္။ ကား သစ် တွင် 1.5T အင်ဂျင် နှင့် 160kW ရှေ့ မော် တာကို အခြေခံ၍ 200kW နောက်ဘက် မော်တာ အသစ်ကို ဘီး လေး ဘီး တပ်ဆင် ထားပြီး အရှိန်မြှင့် ချိန် ၁၀၀ ကို ၄. ၃ စက္ကန့် အထိလျှော့ချ လိမ့်မည်။ Pure Electric Battery မိုင် ၂ ၁၅ ကီလိုမီတာ ရှိပါတယ်။
အသွင်အပြင် အားဖြင့် BYD Tang DM-p သည် ကုမ္ပဏီ၏ နောက်ဆုံးပေါ် မိသားစု ပုံစံ ဒီဇိုင်း ကိုအသုံးပြုသည်။ ရှေ့ ဘက်တွင် ကား သစ် သည်ပိုမို ကြီးမားသော စားသုံးမှု ကင် ကိုအသုံးပြုသည်။ ကင် ၏အတွင်းပိုင်း သည်အလွန် မှတ်မိ လွယ် သော dot-matrix စကေး ပုံစံ ဖြစ်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံး ရှိ ရှေ့ မီး များသည် ချွန်ထက် သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် ကင် ဘောင် နှင့် ရှေ့ ဘက်တွင် chrome အလှဆင် ထားသော strips များကို ထည့်သွင်းထားသည်။
BYD Tang DM-p ၏အတွင်းပိုင်း ဒီဇိုင်း သည် အတော်အတန် ရိုးရှင်းပြီး အရောင် နှစ်မျိုး ပါသော ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုသည်။ မော်ဒယ် သစ် တွင် LCD dashboard နှင့် ကြီးမားသော ဆိုင်းထိန်း စနစ် ဗဟို ထိန်းချုပ်မှု မျက်နှာပြင်-နည်းပညာ အပြည့်အဝ-နှစ်ဆ ပြော သော ဘက်စုံ သုံး စတီယာ ရင် တပ်ဆင်ထားသည်။ BYD Tang DM-p တွင် ထိုင်ခုံ ခြောက် ခု ရှိပြီး ဒုတိယ တန်း တွင် သက်တောင့် သက် သာရှိ စေရန် လျှပ်စစ် ချိန်ညှိ နိုင်သည့် လွတ်လပ်သော ထိုင်ခုံ များ တပ်ဆင်ထားသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:BYD သည် Volkswagen ထက်သာလွန် ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မော်တော်ယာဉ် စျေးကွက် တန်ဖိုး တွင်
BYD နှင့် Tesla SUV ကား ရောင်းအား သည် ဇန်နဝါရီ မှ April ပြီ လအထိ သိသိသာသာ တိုးတက် ခဲ့သည်
China Automobile Industry Association (CAAM) ၏အဆိုအရ BYD နှင့် Tesla တို့သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ April ပြီ လအထိ နှစ်စဉ် SUV ရောင်းအား တိုးတက်မှု အများ ဆုံးဖြစ်သည်။
ကဏ္ဍ ခွဲမထား May 27 မေ 29, 2022